Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mpisolovava: Fiovana lehibe ao amin'ny FAA hahazoana tombony amin'ny US Aviation
Ny fandaminana indray mandeha lavitra natolotry ny FAA dia hetsika azo ekena izay tokony hanampy ny maso ivoho hiara-hiasa amin'ny fiaramanidina taonjato faha-21, hoy ny mpisolovava roa LeClairRyan nandritra ny webinar 90 minitra nandrakotra olana maro isan-karazany tao amin'ny sehatry ny sidina amerikana, anisan'izany ny volavolan-dalàna momba ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana.
Ny fandaminana indray ny FAA dia mifantoka amin'ny fanoloana firafitry ny fandaminana 30 taona misy ny biraom-paritra sy ny mpitantana miaraka amin'ny iray streamline izay mety kokoa amin'ireo mpitatitra an'habakabaka ankehitriny, hoy ny mpisolovava taloha. Mark A. Dombroff, ny Alexandria-tompon'andraikitra mifototra amin'ny LeClairRyan ary mpiara-mitarika amin'ny fampiharana ny indostrian'ny fiaramanidina nasionaly. "Nandritra ny asako dia nandre fitarainana momba ny biraom-paritra isan-karazany izay samy manana ny fomba fanaony aho, miaraka amin'ny fampiharana tsy tapaka ny lalàna sy ny fanaraha-maso," hoy izy nanamarika nandritra ny webinar. "Niteraka olana isan-karazany tao amin'ny indostria izany."
Rafitra iray mirindra, mifanohitra amin'izany, mampanantena fa hitondra ambaratonga lehibe kokoa amin'ny tsy fitoviana amin'ny fanaraha-maso sy ny fanarahana fenitra ho an'ireo mpitatitra rivotra manerantany sy mitambatra, hoy i Dombroff. "Mazava ho azy, amin'ny fahitako azy, tsy fanovana tsotra izao ity mba hahitana fiovana," hoy izy tamin'ny mpijery an-tserasera, nahitana olona maherin'ny 200. "Misy dikany betsaka izany."
Dombroff dia nanatevin-daharana ny webinar ("FAA Reorganisation and Change: Ny zavatra rehetra miova ve tsy misy miova?") Nataon'i Mark E. McKinnon, ary mpisolovava amin'ny seranam-piaramanidina taloha sy mpiara-miasa ao amin'ny LeClairRyan's Alexandria birao.
Ny fampisehoana dia nahitana fanavaozana feno momba ny lalàna momba ny fanavaozana ny faha-21 taonjato faha-XNUMX, ny fanavaozana ary ny fanaovan-dalàna (AIRR). Ny lalàna federaly roa tonta, izay manomboka mamaky ny Kongresy izao, dia miomana amin'ny fandaminana indray ny FAA ao anatin'ny fahazoan-dàlana maharitra enin-taona. Araka ny nomarihan'ny mpisolovava nandritra ny webinar, ny tanjon'ny volavolan-dalàna dia ny fanatsarana ny fiarovana ny rivotra sy ny traikefa manidina; fampiroboroboana ny fanavaozana ny rafitra fiaramanidina tsy voafehy (izany hoe, drôna); famatsiam-bola ny fotodrafitrasa seranam-piaramanidina, ary ny privatisation ny rafitra fanaraha-maso ny fifamoivoizana.
Ny olana farany, nanamarika i McKinnon, dia namorona fisarahana, miaraka amin'ny seranam-piaramanidina sy ny seranam-piaramanidina ankapobeny manohana ny privatisation ary ny indostrian'ny seranam-piaramanidina no maniry ny quo quo. Na eo aza izany, hoy i McKinnon, ireo mpanohana ny fanovana dia manao adihevitra mandresy lahatra.
"Ny fomba fiasan'ny governemanta federaly, miaraka amin'ny fizarana vonjimaika mandritra ny efa-taona na fito taona, dia tsy voatery ho tsara indrindra amin'ny rafitra fanaraha-maso ny fifamoivoizana amin'ny rivotra," hoy izy tamin'ny mpanatrika. “Izy rahateo dia miatrika fanamby ara-teknolojia marobe, toy ireo fotodrafitrasa sy fotodrafitrasa efa antitra. Tsy afaka mitantana ny fanavaozana ireo rafitra ireo ianao rehefa tsy maintsy mamaky ny lalana any anaty lalana ary mamerina mijery ireo ezaka ireo isaky ny taona vitsivitsy. Fa kosa, ianao mila orinasa afaka mamaha ny lozika amin'ny fomba lôjika kokoa, miaraka amin'ny fandaharam-potoana tsy voakorontana noho ny politika ankehitriny. ”
Tsy voahidy noho ny fiankinan-doha amin'ny kitapom-bolam-panjakana federaly, ny rafi-privatisme dia hanana fahaizana bebe kokoa hidirana amin'ny tsena renivohitra sy hamoaka fatorana, farafaharatsiny hitan'ny mpanohana azy, hoy i McKinnon tamin'ny mpanatrika. "Hisy loharanom-bola hafa," hoy izy. "Tsy mila miantehitra amin'ny fizotry ny tetibola federaly ianao ary afaka manomana drafitra tsara kokoa momba ny vola miditra ary ny fomba hampiasana azy."
Saingy ahoana ny amin'ny tsikera fa ny privatisation dia hanolotra ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana an'habakabaka amerikana ho any amin'ny mpanome ambany indrindra, hanimba ny fiarovana mba hahazoana tombony? Nandritra ny webinar, Dombroff dia nanamarika fa ny singa ao amin'ny rafitra efa misy - indrindra ireo tilikambo tsy fanaraha-maso «radar» dia efa navotsotra tamin'ny alàlan'ny programa tilikambo fanaraha-maso ny fifanarahana FAA. "Orinasa maromaro, toa ny Robertson Aviation na Midwest Air Control Control, efa miasa ao anatin'ny fifanarahana amin'ny FAA," hoy izy. “Mampiasa fomba fiasa sy boky torolàlana FAA izy ireo ary araha-maso amin'ny fenitra mitovy. Raha ny marina dia tsara ny FAA amin'ny fiantohana fa hitazomana ireo fenitra sahaza azy. "
Ny lohahevitra hafa voarakitra mandritra ny webinar dia misy:
topimaso momba ny andininy ao amin'ny lalàna AIRR faha-21 izay miantraika amin'ny General Aviation, fanalefahana feo, ary fanavaozana ny fanamarinana, ary koa fikarohana momba ny olana maro hafa toy ny fandrarana ny fiantsoana finday tsy mazava, ny fanovana ny adidin'ny mpanamory sidina / fotoan-tsasatra ary ny fameperana manodidina midona;
fandinihana amin'ny antsipiriany ny fanovana ny birao / serivisy FAA manokana, ao anatin'izany ny serivisy momba ny fiaramanidina fiaramanidina, birao fiantohana fiarovana ny zotram-piaramanidina, birao fiantohana fiarovana amin'ny sidina ankapobeny, birao fitsipi-piarovana, biraon'ny orinasam-panorenana, ary koa ny fanazavana ny fananganana ny serivisy fanamarinana fiaramanidina sy ny biraon'ny mpanolo-tsaina lehibe;
ary fifanakalozan-kevitra momba ny fanosehana hanosika ny fanarahan-dalàna FAA sy ny ezaka fampiharana tsy hanakaiky ny fomba fanasaziana mankany amin'ny “kolontsaina fiarovana”.
Raha te handre ny rakipeo feno momba ny webinar dia tsidiho: